Articles – My Doctor
Articles	Admin	2018-04-19T14:31:00+00:00
Admin	2017-11-24T11:36:39+00:00	November 24th, 2017|1 Comment
ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါ ( Japanese Encephalitis Disease JE D) ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါ (JE )
tin su	2017-11-23T14:11:12+00:00	November 22nd, 2017|0 Comments
အေအိုင်ဒီအက်စ်ရောဂါနိဂုံး၏ နိဒါန်း နှစ်စဉ် ဒီဇင်ဘာလတစ်ရက်နေ့သည် ကမ္ဘာ့ခုခံအားကျဆင်းမှုကူးစက်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးနေ့ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုနေ့မှာ လူသားထုတစ်ရပ်လုံးအနေဖြင့် ကမ္ဘာ့အနှံ့အပြားမှာ လူ့မျိုးနွယ်တစ်ခုလုံးကို
tin su	2017-11-23T14:08:27+00:00	November 22nd, 2017|0 Comments
AIDS အိတ် စ်ခေါ် ခုခံအားကျဆင်းဝေဒနာရှင်မိခင်များနဲ့ ART ကုထုံးများ ရောဂါပိုးဝင်လို့ဝေဒနာ တစ်ခုခု ခံစားလာရရင်၊ ချက်ချင်းဆိုသလိုပဋိဇီဝဆေးတွေ
Admin	2017-11-17T08:41:54+00:00	November 17th, 2017|0 Comments
ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါကိုကာကွယ်ပါ ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါသည် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပွားလျက်ရှိပါသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါ ဓါတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာ (၃၉၃)ဦးရှိပါသည်။ ၃၀-၆-၂၀၁၇
tin su	2019-03-11T11:40:14+00:00	November 9th, 2017|0 Comments
အပြေးအားကစားသမားများတွင် ဖြစ်တတ်သော ဝေဒနာများ အားကစားသမားများသည် မကြာခဏထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုဖြစ်တတ်ကြသည်။ အပြေးသမားများတွင် ပေါင်နှင့် ဒူးတွင် ပိုဝေဒနာခံစားရပြီး လိုအပ်ပါက
tin su	2017-11-11T08:52:20+00:00	November 9th, 2017|0 Comments
မီးမီးလေးမို့ မေမေပျို့အန်နေတာလား? ဟုတ်ပါတယ်။ များစွာသောလေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရ သမီးမိန်းကလေးကိုယ်ဝန်ဆောင်ထားရသူ မေမေတို့ရဲ့ ရာခိုင်နှုန်း၅၅% ကျော်ဟာ သားယောကျာ်းလေး ကိုယ်ဝန်ဆောင်သူများထက်
tin su	2017-11-11T08:42:43+00:00	November 9th, 2017|0 Comments
ကလေးမယူခင် ပြင်ဆင်ကြစို့လား? အိမ်ထောင်ရှင်တိုင်းအတွက် ဘဝ ရည်မှန်းချက်၏ ပျော်ရွင်သော အစိတ်အပိုင်းမှာ မိမိကလေးကို ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဒါကြောင့်
tin su	2017-11-07T09:29:56+00:00	November 1st, 2017|0 Comments
အမျိုးသမီးများရဲ့ ''ရှက်ရှက်'' ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးပေးသင့်သည့်များ အမျိုးသမီးတွေမှာ အပျိုဖော်ဝင်စကတည်းက၊လစဉ်ဓမ္မတာသွေးဆင်းရတဲ့၊ ဒုက္ခနဲ့၊ ကလေး မွေးဖွားရတဲ့ ကာယိကဒုက္ခတွေကို၊ ''
tin su	2017-11-07T09:23:56+00:00	November 1st, 2017|0 Comments
ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက် အရေးပါသော ကုသခြင်း၏အခန်းဏ္ဍ ဆေးပညာနှင့်ကျန်းမာရေးနယ်ပယ်တွင် ''Prevention is better then Cure ''
tin su	2017-11-07T09:20:12+00:00	November 1st, 2017|0 Comments
ကိုရီးယား၏ သိုင်းရွိုင်းကင်ဆာ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသည် သန်း ၅၀ မျှသော နိုင်ငံသားများတွက် အမျိုးသားကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုရံပုံငွေ စနစ်ကို
Admin	2018-01-03T14:53:15+00:00	January 3rd, 2018|0 Comments
ကိုယ်ဝန် ဘယ်လိုတားကြမလဲ (၃) ကျွန်တော်။ ။ ကဲ ဒါဆို တားဆေးကဒ်နဲ့ သုံးလခံထိုးဆေး အကြောင်းတော့သိသင့်သလောက်သိပြီထင်တယ်။
Admin	2018-01-03T14:43:31+00:00	January 3rd, 2018|0 Comments
ကိုယ်ဝန် ဘယ်လိုတားကြမလဲ (၂) ကျွန်တော်။ ။ ကဲ အခုဆိုရင် တားဆေးကဒ်အကြောင်း သိသင့်သလောင်သိပြီထင်တယ်။ ဒါနဲ့
Admin	2018-01-03T14:43:15+00:00	January 2nd, 2018|0 Comments
ကိုယ်ဝန်ဘယ်လိုတားကြမလဲ (၁) Oral Contraceptive Pills မနက်ပိုင်းဆေးခန်းဖွင့်ချိန် ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် စုံတွဲတစ်တွဲ ဆေးခန်းတွင်းသို့ဝင်လာသည်။ ကျွန်တော်
Admin	2017-11-23T14:00:05+00:00	November 23rd, 2017|0 Comments
“လူငယ်များနဲ့ HIV အန္တရာယ်” နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ဒီဇင်ဘာလ (၁)ရက်နေ့ဆိုရင် ကမ္ဘာ့ ခုခံအားကျဆင်းမှုရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေးနေ့ (World
tin su	2017-11-23T14:23:30+00:00	November 23rd, 2017|0 Comments
မိန်းမသားများ သတိထားစရာ ဆေးခန်းထိုင်ရသည်ဆိုသောအလုပ်က တစ်ခါတစ်ခါမှာ ရင်ကိုလွန်စွာပင်ပန်းနွမ်းလျစေသည်။ ဆရာဝန်ဆိုသည့်ဘ၀မှာလူနာတို့၏သေချင်းတရားကို ထိုင်ဝမ်းနည်းနေ၍လည်းမဖြစ်နိုင်။ ကိုယ့်ရှေ့ မျက်မှောက်မှာပင် သိသင့်တာတွေမသိ၍
tin su	2017-11-23T14:18:27+00:00	November 23rd, 2017|0 Comments
မိုးမမိဖို့ ကောင်းတဲ့မိုးကာလိုတယ် ဆရာ အခုတလော ပြောတာတွေက ပွဲနည်းနည်းကြမ်းသလားလို့ အေး၊ တချို့ ကဏ္ဍတွေက ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းပြောမှ
tin su	2017-11-20T12:08:31+00:00	November 20th, 2017|0 Comments
လုံလောက်စွာမအိပ်စက်ခြင်း၏ အန္တရာယ် လူတစ်ယောက်ပုံမှန် စိတ်ကျန်းမာ၊ကိုယ်ကျန်းမာနေစေဖို့ရာ လုံလောက်စွာအိပ်စက်ခြင်းသည် အခြားသောအရာများထက် အရေးပါသော အခန်းကဏမှ ပါဝင်နေပါသည်။ ဒါဆို
tin su	2017-11-16T09:17:10+00:00	November 15th, 2017|0 Comments
ဝိတ်မကျသေးဘူးလား။ ဒီအချက်တွေကြောင့် ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာ သင်စဉ်းစားမိပါသလား။ ၁။ အိပ်ချိန်ပုံမှန် မရှိခြင်း အိပ်ချိန် များလွန်း နည်းလွန်းတာကလည်း
tin su	2019-03-05T15:09:53+00:00	November 13th, 2017|0 Comments
အဆစ်​နာ​တဲ့ လူနာ​တွေ ​မေး​လေ့ရှိတဲ့ ​မေးခွန်း ဆရာမ ​ဆေးမ​ပေးဘူးလား၊ ​ဆေးမထိုးဘူးလား ​ဒေါ်ယမင်း တစ်​​ယောက်​တည်း အ​တွေးက​တော့
tin su	2017-11-11T11:45:00+00:00	November 9th, 2017|0 Comments
ပ​ယောဂ ပြုစားတာတဲ့!! အမျိုးသမီး​လေးတစ်​​ယောက်​ရဲ့ ဇာတ်​လမ်းပါ။ အပျိုအရွယ်​​လေး၊ ဗိုက်​ကြီး ပူပူလာတယ်​၊ အရပ်​က ကဲ့ရဲ့ကြတယ်​။ ​နောက်​​တော့